को डायपर आफ्नो पिल्ला कसरी सिकाउन? यो सायद भर्खरै minted अवैतनिक प्रजनकों सोधेका सबै भन्दा साधारण प्रश्न छ।
आफ्नो पाल्तु जनावर तालिम, उहाँले अझै पनि सानो छ, किनभने धैर्य आवश्यक हुनेछ, त्यसैले तुरुन्तै के र कहाँ बुझ्न छैन। पहिलो तपाईं बाथरूम को भविष्यको लागि एक स्थान छनौट गर्न आवश्यक छ। गर्न राख्नु भएको अवशोषण डायपर, तपाईं प्रयोग परिवर्तन गर्न आवश्यक हुनेछ। नियम, यो दुई वा तीन पटक एक दिन छ। हामी पिल्ला आन्दोलन accustom गर्न समय सीमित गर्न सल्लाह। उदाहरणका लागि, यो एक पिंजरे वा एउटा मात्र कोठा मा पनि भने। निस्सन्देह, पहिलो समय बच्चा शायद डायपर गर्न आउँछ।
को डायपर आफ्नो पिल्ला कसरी सिकाउन: कार्य योजना
को पाल्तु जनावर गलत ठाउँमा गएपछि, कागज को टुक्रा लिन र मूत्र यसलाई obmoknite। अर्को, smelly टुक्रा पिल्ला शौचालय लागि आरक्षित छ जो डायपर, मा राखे। जहाँ बच्चा एक पानीको सानो खाडल बनाएको छ ठाउँ, बाँकी गन्ध गर्न धुन।
तपाईं पिल्ला कोठा accustom सीमित समय छ भने, पहिले डायपर कोठा को बहुमत छोप। यसैले, पाल्तु जनावर यसलाई चाँडै साइटमा प्रयोग हुनेछ बाहेक, यसलाई प्राप्त गर्न बढी सम्भावना हुनेछ। बिस्तारै न्यूनतम (एक टुक्रा) गर्न डायपर को संख्या राख्नुहोस्। खुवाउने र सुतेपछि यो अवधि puppies थैली खाली हुन्छ मा को रूप मा, डायपर मा बच्चा राख्नु।
कसरी समय थिचिएको भने, डायपर गर्न यर्क सिकाउन
तपाईं लगातार पिल्ला निगरानी गर्न समय छैन भने, तपाईंले उदाहरण, एक आश्रय वा aviary लागि, आफ्नो आन्दोलन सीमित गर्न आवश्यक हुनेछ। यस्तै डिजाइन हरेक स्टोरमा पाउन सकिन्छ।
को पिंजरे आफ्नो पाल्तु जनावर जस्तै पीठ, पानी र खाना कटोरे, खिलौने, र, को पाठ्यक्रम, को डायपर रूपमा वस्तुहरू हुनुपर्छ।
पिल्ला तपाईं कटोरे, खिलौने र ओछ्यानमा उहाँले भद्रगोल बनाउन चाहनुहुन्थ्यो नजिकै रूपमा एक शौचालय बनाउन सक्छ जहाँ केही विकल्पहरू हुनेछ सहमत हुनुहुन्छ। बच्चा अझै पनि एउटा विकल्प, र सबै भन्दा वफादार छ: डायपर मा पिशाब।
तपाईं डायपर एक पिल्ला तालिम कसरी प्रश्न विचार गर्दा, तपाईं यसलाई गर्न सकिन्छ जसको लागि अवधि रुचि हुन पक्का छन्। habituation प्रक्रिया (यो धेरै महिना लाग्न सक्छ) एकदम लामो छ, तर यो वास्तविक हो।
तपाईं थाह छ, पुरुषहरु क्षेत्रमा चिनो गर्छन, त्यसैले तिनीहरूले स्तम्भहरू रूपमा एउटै ठाउँमा जान तालिम कठिन छन् (अलमारियाँ, टेबल, आदि को खुट्टा), तिनीहरूले इशारे। त्यसैले, आफ्नो कोठरी को सामने यस्तो बोतल वा डम्बबेलनेबुला रूपमा केही समान वस्तु राख्न सक्नुहुन्छ। एक दिन परिवर्तन गर्न धेरै पटक आवश्यक चयन डायपर कुरा र्याप निश्चित हुनुहोस्।
प्रत्येक सफल प्रयास डायपर प्रशंसा पाल्तु जनावर जान लागि, यसको विनम्रता व्यवहार नलागेकोगोली यसलाई त्यसो गर्न असम्भव छ, गाली लागि, स्पष्ट र sternly भन्छन्। तपाईं बच्चाहरु चोट कारण किनभने सक्नुहुन्छ, त्यसैले मात्र कडी टोन प्रयोग Slapping र पिटाइ, निषेध गरिएको छ।
यदि तपाईं केवल एक "तातो" मा समातिए पिल्ला दण्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। यो एक बेला पाल्तु जनावर तपाईं उसलाई के आलोचना बुझ्न छैन किनभने, भूल छ को त्यसपछि सजाय भएको छ भने।
को डायपर आफ्नो पिल्ला कसरी सिकाउन? धेरै सरल! तपाईं हाम्रो सल्लाह गर्न मद्दत गर्नेछ। रोगी हुन, तपाईं सफल हुनेछ!
सबैभन्दा खराब बिरालो नस्ल। अवस्थित वा छैन?
अदालत मा मामला, वा जहाँ बिरालोहरु urchalnik
धूपदान को enameled सेट। र बेफाइदा
"Misoprostol": analogues, निर्देशन, समीक्षा
कैथरीन वन Waldeck, Waldeck: Cinderella वा मेहनती?
भिडियो प्यान AVC-305: पद, वर्णन र विनिर्देशों
शिक्षक दिवस मा आध्यात्मिक अभिवादन स्कूल प्रमुख
अदालत निर्णय को ओपरेटिव भाग: अर्थ के?